Xulashada sheekooyinka xiisaha leh
Faallooyinka sheekooyinka xiisaha leh
Iftiinka xagaaga, iyo Habeenka Kadib, waxaa qoray Jón Kalman Stefánsson
Qabowgu wuxuu awood u leeyahay inuu waqti ku qaboojiyo meel sida Iceland oo kale ah, oo horeba u qaabaysay dabeecadeeda sidii jasiirad ka xayiran Waqooyiga Atlantic, una siman Yurub iyo Ameerika. Muxuu ahaa shil juqraafi oo kali ah in laga sheekeeyo kuwa caadiga ah si gaar ah inta kale...
3 buug ee ugu wanaagsan Anne Tyler
Maalin kasta waa meel caadi u ah qof kasta oo bini -aadam ah. Laga soo bilaabo albaabada gudaha ee guri kasta, oo laga siibay is -qarinta xilligan, jilayaasha aan noqonno kuwa ugu sugan jiritaanka. Anne Tyler waxay u hibeysaa shaqadeeda noocaas oo kale oo dhammaystiran, kan ah ...
Mr Wilder iyo aniga oo uu qoray Jonathan Coe
Raadinta sheeko ka hadlaysa caalamkan ka soo ifbaxaya cilaaqaadka bini'aadamka ee curdinka ah, Jonathan Coe waxa uu wax ka qabtaa qaybtiisa xiisaha tafaasiisha ugu badan. Taasi haa, Coe kama tagi karo qiimahaas faahfaahsan ee ku qotoma sharraxaadaha ugu dhammaystiran. Ka…
Qoob ka ciyaarka iyo dabka, waxaa qoray Daniel Saldaña
Dib u midoobintu waxay noqon kartaa mid qadhaadh sida fursadaha labaad ee jacaylka. Asxaabtii hore waxay ku dadaalaan inay dib u helaan boos aan hadda jirin si ay u sameeyaan waxyaabo aan hadda ka tirsanayn. Ma aha wax gaar ah, sababtoo ah qoto dheer kuma qanacsana, laakiin si fudud u raadi ...
Jannada Korka saqafka, waxaa qoray Nathacha Appanah
Yaa kale oo ugu yaraan sii daayay jeexitaankii Marco ee raadinta hooyadiis. Waqtigan da'da jilaaga, Lobo, wuxuu u soo dhawayn doonaa Holden Caulfield (haa, Salinger's nihilistic teenage). Oo shaygu waa sidoo kale sawirka hooyada ...
Toddoba Talaado, waxaa qoray El Chojin
Sheeko kastaa waxay u baahan tahay laba qaybood haddii nooc ka mid ah isku -darka la helo, taas oo ah waxa ay ku saabsan tahay qaab -dhismeed kasta oo ku soo qulqulaya dhulka jilitaanka dareenka. Maaha su'aal ah in la iftiimiyo sheekooyinka noocaan ah ee qofka koowaad hortiisa. Sababtoo ah sidoo kale ...
La la'yahay, waxaa qoray Alberto Fuguet
Waxaa jira waqtiyo luqaddu ay weheliso sheeko leh nalka ugu saxsan. Sababtoo ah raadinta qof la waayay uma baahna suugaan ama suugaan. Miyir -qabka sheekadu wuxuu ka dhigayaa waddadan dib -u -kulminta shaqsiyeed inay ka kooban tahay isu -dhowaansho iyo u dhowaansho si ay noogu soo dhoweyso dhammaan ...
Kala duwan, waxaa qoray Eloy Moreno
Hagaajinta akhriska, iswaafajinta sheeko gaar ah oo u dhaxaysa Eloy Moreno iyo Albert Espinosa. Sababtoo ah labadooduba waxay ku raad raacaan sheeko-abuurkooda shaabadda dhabta ah ee ku xeeran qallafsanaanta nolosha iyo riwaayadahooda kama dambaysta ah ee aan la tuhunsanayn ee ugu xiisaha badan. Waxay noqon doontaa wax sidaas oo kale ah, halka ...
Carmalka, oo uu qoray José Saramago
Qorayaasha waaweyn sida Saramago ayaa ah kuwa had iyo jeer sii wata shaqadooda. Sababtoo ah marka ay shaqadu ka kooban tahay in bini -aadamnimadu ku dhex milmay alchemy suugaaneed, hoos -u -dhigidda jiritaanka ayaa la gaaraa. Mawduuca ka sarraynta dhaxalka farshaxanka ama suugaanta ayaa markaa gaadha ku habboonaantaas dhabta ah ...
Bogga1 Bogga2 ... Bogga8 Xiga →